Wixii Macluumaad WIC Guud:
Montana WIC Barnaamijka
(Xafiiska Maamulka Gobolka)
Telefoonka: 800-433-4298 or (406) 444-5533
Dadka doonaya inay codsadaan WIC waxay u baahan yihiin inay la xiriiraan wakaaladda WIC ee degaankooda si ay u sameystaan ​​ballan. Qaar ka mid ah xarumaha caafimaadka ee degaanka waxay leeyihiin maalmo socod ah iyo kuwo kaleba waxay u adeegaan ka qaybgalayaasha aagga maalmaha qaarkood ee bisha. Isticmaal macluumaadka goobta WIC ee rugta caafimaadka si aad u heshid rugta caafimaadka ee degaankaaga oo ku siiso wicitaan.
WIC waxay u adeegtaa dadka degan Montana kuwaas oo ah:
Naasnuujinta, illaa dhalashada koowaad ee ilmaha
Hooyooyinka aan nuujin naaska, illaa lix bilood dhalashada ilmaha
Dhallaanka iyo caruurta da'doodu ka yar tahay shan sano jir
Macaamiisha WIC waa inay buuxiyaan tilmaamaha dakhliga WIC iyo inay leeyihiin baahi caafimaad ama nafaqo.
Dad badan oo shaqeeya ayaa u qalma WIC mana oga inay ogaanayaan!
Cuntooyinka loo oggolaaday WIC waa ilo wanaagsan oo nafaqooyin muhiim ah. Ma jirto sahay cunno oo keliya oo dhan nafaqooyinka aad u baahan tahay, sidaas darteed cun cunno badan oo kala duwan maalin kasta si aad caafimaad u hesho.
Baakadaha Cuntada ee WIC waxay bixiyaan cuntooyin kala duwan laakiin ma aha wax kasta oo aad u baahan tahay. Ku daridda cuntadaada WIC ee cuntada aad caadi ahaan cunayso waxay kaa caawineysaa inaad hesho cunto caafimaad leh. Xidhmada cuntada ee aad heshay waxay ku xiran tahay haddii aad uur leedahay ama aad naas nuujinayso, iyo da'da ilmahaaga.
Eeg liiska cuntada ee Ingiriisi
Ka-qaybgalaha Tababarka Hogaamiyaha:
MT eWIC - Ingiriis
Raadi Weriyeyaasha Waalidiinta haysta